Amazon Music iri kupisa pazvitsitsinho zveApple Music | Ndinobva mac
Amazon Music iri kupisa pazvitsitsinho zveApple Music
Kana tikataura nezvekutamba mumhanzi, isu tinowanzo ganhurira panorama yazvino kuApple Music (yechikamu icho chatinofanira kuita) uye Spotify (mukwikwidzi wayo mukuru uye wekare). Asi kune hupenyu hunopfuura Apple Music uye Spotify Uye kana zvisiri kuudza Jeff Bezos neyake yekutenderera mimhanzi sevhisi Amazon Music.
Kushambadzira kweAmazon mimhanzi sevhisi yakangozivisa izvozvo yadarika vashandisi mamirioni makumi mashanu nemashanu. Iwo achangoburwa epamutemo Apple Music manhamba anobva munaJune 2019, aine mamirioni makumi matanhatu vanyoreri. Iwo achangoburwa epamutemo manhamba kubva kuSpotify ari kubva munaGunyana 60, aine mamirioni 2019 vanyoreri.
Amazon inotaura kuti yavo yekushambadzira mimhanzi yakakura 50% gore-pamusoro-gore muUnited States, United Kingdom, Germany neJapan. MuSpain, Italy, France neMexico nhamba yevatengi yakapetwa kaviri.
Steve Boom, Mutevedzeri weMutungamiriri weApple Music, anoti:
Isu zano redu rakasarudzika uye, sekufanana nezvose zvatinoita kuAmazon, zvinotanga nevatengi vedu. Isu tagara takaisa pfungwa pakuwedzera mumhanzi wekushambadzira musika nekupa muteereri sarudzo isingaenzaniswi nekuti isu tinoziva kuti vateereri vakasiyana vane zvakasiyana zvavanoda.
Hatizive kana nhamba dzakapihwa neApple Music Ivo vanosanganisira Prime Music vashandisi uye avo vanofarira maAmazon emahara ekushambadzira-anotsigirwa sevhisi, asi kazhinji. Kana zvirizvo, ichine nzira refu yekuenda kuti iswedere padhuze neveSpotify's 248 mamirioni evashandisi vemwedzi kana isu tikaisa vanyori uye kubhadhara vashandisi pamwechete.
Apple inopa chete imwe nzira yekushandisa: kunyorera pasina kushambadzira. Kana iwo manhamba akaburitswa neAmazon anosanganisira ese matatu maitiro, ichiri nzira refu kubva pakuva tyisidziro kuApple Music. Amazon, kusiyana neApple Music, inotipa iyo HD modhi ye14,99 euros pamwedzi kuwedzera kune iyo vhezheni neyakajairika mhando senge Apple Music ye9,99 euros pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Amazon Music iri kupisa pazvitsitsinho zveApple Music
Teregiramu inovandudzwa yeMac nekuvandudzwa mune ongororo
Scott Z. Burns ave kuda kusaina paApple TV +